bbc somali – Just another WordPress site
Posted byadmin December 11, 2018 Posted inUncategorizedLeave a comment on Maxay tahay sababta Itoobiya oo xeeb la’aan ah u sameysanayso ciidamo badeed?
Hablaha Soomaaliyeed ee ka howlgala xeebihii burcad baddeeda
Toddobaadkan waxaa toban sanadood jirsaday Ciidammada Badda ee Midowga Yurub ee ka howlgalayay badaha Soomaaliya.
Howlgalka Atlanta ee Midowga Yurub wuxuu u muddadaas ka shaqeynayay sidii uu u dhowri lahaa qaraarkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee sannadkii 2008-dii kaas oo loogaga gol lahaa in lagu soo afjaro dhibaatada burcad badeedda Soomaalida.
Dadka deggan deegaannada ku teedsan xeebaha ee markii hore ay ka qaraaban jireen burcad badeedda ayaa ka faa’iidaysteen mashaariic horumarin ah oo ay Hay’adaha Qaramada Midoobay halkaasi ka fuliyeen.
Haweenka degan magaalo xeebeedka Eyl ayaa ka kalluumaysta hadda xeebihii ay ka howl geli jireen burcad baddeeda, Xaawo Mahad Faarax waxa ay ka mid tahay haween ay tababar siiysay Hay’adda Qaramada Midooobay ee FAO, “waayadii hore ee xoolaha la dhaqan jiray kalluunka lama danayn jirin balse kalluunka hadda waxa uu noqday wax fiican oo aad loo cuno, markii ay xoolaha iga dhamaadeen halkan ayaan soo aaday si aan ooga shaqaysto carruurta biilkooda aan ooga raadsado”.
Tahriibayaal ku dhamaaday xeebaha dalka Yemen
Maxay dalalka adduunka ugu loolamayaan Marinka Baabul Mandeb ?
Dadka Soomaalida ayaa wayadii hore waxay badanaa cuni jireen hilibka xoolaha marka hadda maxaa isbaddelay? Xaawo ayaa ka jawaabtay waxaa ay tiri”hadda si wanaagsan ayey Soomaalida u fahantay cunidda hilibka kalluunka, waayadii hore sanka ayaa laga qabsan jiray kalluunka balse hadda Soomaalida waa ay fahantay oo faa’iidooyinkiisa ayey fahmeen”
Hay’adda FAO, ayaa waxa ay u dhistay warshad dadka badda ka soo saaro khayraadka laga ganacsado ee ku nool magaalada, Yaasiin Jaamac Diiriye waa maamulaha warshaddaasi, waxaa uu yiri “warshaddaan kalluunka ee halkan laga hirgeliyey waxaan ka rajaynayaa in dumarka iyo dhalinyarada ay wax tar fiican u yeelato, “
Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee maamul goboleedka Puntland ayaa waxa caawimaad ka helaa dadka ka kalluumaysta badda, Daahir Faarax Xusseen waa agaasimaha tababarka ee wasaaraddaas “Anagoo kaashanayno hay’adaha Qaramada Midoobay sida FAO, wasaaradda waxa ay u taagan tahay siddii ay dadweynaha u caawin lahayd anagoo baahiyahooda gudbinayno marwalba”.
Madaxa hay’adda FAO, Michael , waxa uu ka waramay waxyaabaha ay hay’adooda u qabatay dadka ka kalluumaysto xeebaha Puntland, waxa uuna yiri ” waxan isku dayeynaa inan fursado badan bilaawno, si aan shaqo abuur u samayno dhaqaalana aan u gelinno bulshada si ay u helaan cunno ku filan, marka xeebaha Soomaaliya waxaa ku jira khayraad badan taa oo loo isticmaali karo mashaariic hormarineed”.
Waxaa dhawaanahan bulshada Soomaaliyeed ku soo badanaya dadka ka ganacsada khayraadka laga soo saaro xeebaha ku yaalla dalka.
Posted byadmin December 11, 2018 Posted inUncategorizedLeave a comment on Hablaha Soomaaliyeed ee ka howlgala xeebihii burcad baddeeda
Sawirka Tiago oo shabeellada la jooga ayaa caan baxay – mid ayaaba u muuqda inuu hab siinayo
Waa sawir caan noqday – wiil ayaa isku sawiray meel ay biyo ku jiraan isagoo ay ku hareereysan yihiin labo shabeel – mid ka mid ah ayaa u muuqda inuu “hab siinayo” isagoo kaamirada eegaya.
Caannimada sawirka ayaa sababtay in su`aalo la iska weydiiyo sida loo rumeysan karo.
Si kastaba, waa dhab waana wax mar walba dhaca.
Tiago Silveira, wiilka sawirka ka muuqda, ayaa la noolaa oo la cayaari jiray nooc ka mid ah shabeelka tan iyo intii uu yaraa, markii uu joogay dalkiisa Brazil.
“Waxaa jira saaxiibbadeyda qaar oo ii sheega in sawirku uu been yahay, balse dad badan ayaa jecel oo doonaya inay sidoo kale la kulmaan shabeellada. Way wanaagsan tahay inaan khibraddeyda tuso dadka aan sideyda oo kale u nasiib badneyn,” 12-sano-jirkan ayaa sidaasi u sheegay Laanta Af-Burtaqiiska ee BBC.
Wuxuu la soo koray bisadaha waaweyn
Waaliddiinta Tiago, Leandro Silveira iyo Anah Jacomo waa saynisyahanno bayolojiga ku takhasusay waxayna ka tirsan yihiin Machadka Shabeelka ee Brazil (IOP) ee ku yaalla gobolka Goias.
Ujeeddadooda ugu weyn waa in daraasad lagu sameeyo lana dhowro bisadda ugu weyn ee ku nool dhulka Ameerika.
“Wiilkeyga wuxuu ku dhashay deegaan uu shabeel ka buuxo wuxuuna bartay sida loola dhaqmo tan iyo intii uu carruur ahaa. Dabcan uma wada afsaxno, laakiin wuu bartay sida loola dhaqmo. Caadi ayay asaga u tahay,” ayuu yiri Silveira, oo markii ugu horreysay soo dhigay sawirka.
“Waa qayb ka mid ah noloshiisa, waxba taas kuma jabna.”
Waaliddiinta Tiago ayaa ka shaqeeya daryeelka nooc shabeelka ka mid ah oo ku nool galbeedka Brazil
Markii uu Tiago dhashay, waaliddiintiisa waxay haysteen saddex shabeel oo dhal.
Safarrada ay waddooyinka ku maraan waxaa ka mid ahaa inay hakadaan oo ay masaasad ku quudiyaan dhammaan afarta shabeelka dhalka ah, kuwaas oo safarrada ay u kaxaysan jireen.
Wiilka ayaa aaminsan inuu aqoon u leeyahay la dhaqanka shabeellada.
“Waa xiriir ku dhisan jaceyl iyo xushmad. Waxaan mar walba jeclaa inaan waaliddiinteyda ka caawiyo xannaaneynta xayawaannada.”
Tiago ayaa waxaa la baray xadka la dhaqanka xayawaannada
Silveira ayaa wiilkiisa baray isla casharkii la baray bulshada ee ku saabsanaa la dhaqanka shabeelka.
“Xayawaannadu ma ugaarsadaan bani`aadamka. Waxay ka falceliyaan dhaqankeenna, marka waa muhiim in la tixgeliyo. Waxay kuu muujinayaan inaad agtooda imaan karto iyo in kale,” saynisyahanka ayaa sidaa yiri.
“Waa muhiim in la barto xudduudaha. Marka ay doonayaan inay is muujiyaan, way soo baxayaan. Ma aha xayawaanno bulshaawi ah, balse waxay aadmiga la yeeshaan xiriir dheer.”
Hooyada Tiago ayaa sheegtay in weligood aysan wax dhib ah ka dhex dhicin wiilka iyo shabeellada – Anah ayaa sidoo kale sheegtay inaysan weligeed wiilkeeda keligii uga tegin xayawaannada.
“Mar walba waan ka taxadareynay shabeellada iyo xayawaannada kaleba. Shuruucdeenna badbaadada way cad yihiin.”
“Waxaan doonayaan inaan waaliddiinteyda ka caawiyo shaqada, marka aan weynaado,” ayuu Tiago yiri
Xarunta daryeelka ayaa waxay ku fadhisaa dhul cabbirkiisu yahay 123 acre, waxaana iska leh Silveira iyo Jacomo, kuwaas oo aan oggoleyn dalxiisayaasha, iyagoo xayawaannada xushmeynaya.
Waxay machadka IOP aasaaseen sanadkii 2002 waxayna markii hore keliya doonateen inay daraasad ku sameeyaan shabeellada, balse markii dambe way beddeleen go`aankooda kaddib markii ay waaxda deegaanka ee Brazil ka codsadeen xannaaneynta dhalka shabeelka ee ay waaliddiintoodu dhinteen.
In ka badan 30 xayawaan ayaa tobankii sano ee la soo dhaafay soo maray xarunta daryeelka ee waaliddiinta Tiago
Sida uu sheegay Silveira, 95% ay qarashka howlaha daryeelka xaywaannada iyagu bixiyaan, halka inta kalena ay deeq ahaan ku soo gaarto.
Haatan, qoysku wuxuu xannaaneeyaa 14 shabeel, oo ay ku jiraan afar dhal ah iyo siddeed waaweyn.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, qoysku wuxuu xannaaneeyay 35 xayawaan.
Shabeellada ayaa aalaaba loo diraa machadyo ka hortaga inay dabar go`aan.
Shabeelladan waxay ku jiraan liiska xaywaannada khatarta ugu jira inay dabar go`aan.
Inkastoo ay ku nool yihiin 21 dal, Brazil waxaa la rumeysan yahay inay ku nool yihiin qiyaastii kala bar inta harsan (20,000 ilaa 30,000 oo xayawaanno ah).
Dhal shabeel oo badan oo qoyska Tiago uu drayeelo waa rajo kaddib markii hooyooyinkood ay dileen beeralley
Si kastaba, kuwa labka ah ee la keeno xarunta IOP laguma celiyo duurka, iyadoo laga cabsi qabo inay dadku dilaan, gaar ahaan beeralleyda ka ceshanaya xoolahooda.
Sabab kale waxay tahay in xaywaannadaas ay in badan la dhaqmeen bani`aadamka.
“Aad ayay u adag tahay in xayawaannadaas ay lumiyaan xiriirka ay la leeyihiin bani`aadamka. Haddii la sii daayo, waxay aadayaan meesha ay dadku joogaan waana la dilayaa” Jacomo ayaa sidaa tiri.
Tiago oo waxbarasho ku jira ayaa keliya maalmahan arka saaxiibadiisa shabeelka saddexdii biloodba mar
Sanadkii hore, Tiago iyo shabeelka ayaa kala baaday – waxaa loo wareejiyay caasimadda gobolka Goiania si uu waxbarashadiisa dugsiga sare uga sii wato.
Aad ayuu ugu xiisaa shabeelka.
“Way igu adag tahay maxaa yeelay waan la noolaa tan iyo carruurnimadeyda. Mar walba oo aan waaliddiinteyda booqdo waxaan dareemaa in shabeelladu ay sidoo kale ii xiiseen – siyaabo kala duwan ayay igula cayaaraan,” ayuu yiri.
“Waa wax lagu farxo kolley, inay ka abaal celiyeen jaceylka iyo xiisaha aan u hayo ayaga.”
Sawirka caan baxay ayaa la qaaday 15 November.
Posted byadmin December 11, 2018 Posted inUncategorizedLeave a comment on Maxay waaliddiintan ugu oggolaadeen wiilkooda inuu shabeelka la cayaaro?
Macron oo ugu dambayntii ka jawaab celiyay cabashada shacabkiisa
Madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa ballan qaaday in uu mishaarka kordhin doono sidoo kalana canshuuta la dhimmi doono, taasi oo jawaab u ah khalalaasihii toddobaadyadii la soo dhaafay daashaday dalka faransiiska.
Madaxweynaha oo ka hadlayay telefishinka ayaa cambaareeyay khalalaasihii ka dhacay dalka, balse waxa uu sheegay in marka si loo eego ay ahaayeen suuragal.
“Mushaarka ayaa lagu dari doono €100 laga bilaabo sanadka 2019-ka” ayuu yiri Mr Macron.
Qorshe loogu kordhin rabay canshuurta dadka dan yarta ah ayaa la meesha laga saraay balse madaxweynaha waxa uu diiday in canshuurta sidii hore loogu soo celiyo dadka maalqabeenka ah.
Muxuu Macron ka yiri dibadbaxyada?
Mr Macron ayaa aqbalay in dad badan aysan ku farax sanayn xaaladda ay ku noolyihiin ayna dareemeen in aan la dhagaysan cabashadooda balse Mr Macron, ayaa markii hore aad u dhaleeceeyay dibadbaxyada hareeyay waddankiisa.
Xilliyadii ay dibadbaxyada dheceen iyo dadkii ku wax yeeloobay
17 November: 282,000 dibedbaxayaal- hal qof ayaa ku dhintay, 409 ayaa ku dhaawacantay- 73 ayaa cabsiga loo taxaabay.
24 November: 166,000 dibedbaxayaal – 84 ayaa dhawaacantay- 307 waa la xiray.
1 December: 136,000 dibedbaxayaal -, hal qof ayaa ku dhintay -263 dhaawac ayaa soo gaaray- 630 xabsi ayaa la geeyay.
8 December: 136,000 dibedbaxayaal – 118 waa ay dhaawacantay- 1,220 xabsiga ayaa la dhigay
Posted byadmin December 11, 2018 Posted inUncategorizedLeave a comment on Macron oo ugu dambayntii ka jawaab celiyay cabashada shacabkiisa
BBC-da waxaa u suurogashay inay hesho magacyada qaar dadkii shalay ku dhintay weerarkii lagu qaaday xarun Sh. Cabdiwali Sh. Cali Cilmi Yare uu ku lahaa magaalada Galkaacyo halkaaso ay ku dhinteen ku dhawaad 20 qof oo ku sugnaa xarunta.
Cabdi Naafac sh Kulli sh Caalam oo kamid ahaa dadkii ka badbaaday weerarka ayaa BBC-da u sheegay in hadda uu ku sugan yahay xaruntii lagu qaaday weerarka isla markaasna uu dhaawac yahay.
Wuxuu sheegay in qaar kamid ahaa dadkii ku sugnaa xarunta ay dhinteen.
“Xarunta waxaa joogay ku dhawaad 130 qof markii weerarka lagu soo qaadayay” ayuu yiri Cabdi Naafac.
Dadka ku dhintay weerarka waxaa kamid ah:
Shiikh CabdiWeli Shiikh Cali Cilmi Yare wadaadkii xarunta lahaa ee la weeraray.
Farxaan Garyare Cali: Wuxuu ahaa ciidanka ilaalda xaruunta.
Suudi Cabdi Kulane: Wuxuu ahaa ciidanka ilaalda xaruunta.
Ceynaanshe Shikh: Wuxuu kamid ahaa dadkii qasaa’idka qaada jiray wuxuu sidoo kale garaaci jiray qalabka.
Maxamed Qaliif Axmed: Qasaai’dka ayuu qaadi jiray.
Sayad Bakar Shiikh Cabdi:Wuxuu ahaa sawir qaade ka tirsan xirta.
Cabdi Mahad Cali Abshir: Durbaanka ayuu garaaci Jiray xiliyada loo baahdo.
Shiikh Cali Shiikh Maxamed Cismaa: Culimada u adeega Shiikha la dilay.
Cabdinuur Shiikh Cabdulweli Shiikh oo uu dhalay shiikha xarunta lahaa ahaana wiil , qasiidooyinka qaadi Jiray.
Dumarka Ku dhintay qaraxa
Waxay isugu jireen kuwo u adeega Shiikha Iyo kuwa qasiidooyinka wax Ka Qaadi Jiray.
Nasra Sh.Cabdulwali shiikh Cali
Xamdi xasan Sh.Axmed
Xaawo cabdi Kulane
Weerarkan ayaa isugu jira mid is qarxin ah iyo weerar toos ah oo lagu bartilmaameed saday xarunta wadaadkaas.
Alshabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxa.
Sababta ay u beegsadeen waxay ku sheegeen inuu af lagaadeeyay nabi Maxamed NNKH horey ayay Alshabaab digniin ugu dirty.
Posted byadmin December 10, 2018 Posted inUncategorizedLeave a comment on Magacyada dadkii ku dhintay weerarkii Gaalkacyo
Dibiga ugu weyn Australia oo cid gowracda la waayay
Dibiga ayaa la waayay cid iibsata
Milkiilaha dibigan ayaa markii hore u soo iibsaday, si uu hordhaan ugu noqdo xoolaha kale, waxaana la dhufaanay ama laga tumay xininyaha da’diisu markay heyd sanad.
Ninka iskaleh ayaa sidoo kale sheegay in uusan wax dhib ah ku heyn dadka.
”Mar walba waxaa uu ahaa neef aad uga weyn lo’da kale, neefafkii lamidka ahaa iyagoo da’ yar ayaa la gowracay, isaga na beec ayaa lagu la’yahay, marka waxaana go’aansaday in faraha laga qaado” waxaa sidaasi saxaafadda u sheegay Mr Pearson oo ah ninka iskaleh dibiga.
Posted byadmin December 10, 2018 Posted inUncategorizedLeave a comment on Dibiga ugu weyn Australia oo cid gowracda la waayay
“Way adagtahay in taageero loo helo laakiin waxaa gacan nagu siiyay hogaamiyeyaasha xisbiyadda sidda Madaxweynaha iyo hogaamiyaha mucaaradka oo dhamaantood la hadlay xildhibaannadooda si ay ugu sheegan halista dalka uu wajihi karo hadii la ansixin waayo qoondada haweenka,” ayay tiri Safiya Cabdi Nuur oo ah xildhibaanad laga soo doorto deegaanka Ijaara oo BBC-da la hadashay.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo khudbad u jeedinaya baarlamaanka
Posted byadmin December 10, 2018 Posted inUncategorizedLeave a comment on Xildhibaanad Safiya Cabid oo u ololeyneysa xeerka jinsiga
Mas’uuliyiinta Maamul goboleedka Jubaland ayaa ka soo horjeestay hadalkii shalay ka soo yeeray guddiga aqalka sare ee loo xil saaray xallinta khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kuwaasi oo ku dhawaaqay in la soo afjaray khilaafka.
Natiijada ay shaaciyeen guddiga waanwaanta ka dhex waday labada dhinac ayaa u muuqatay hadal aad loo sugayay , hase ahaatee waxaa su’aalo badan la iska weydiinayay in cid walba ay ku qanacsantahay.
Isla shalayba waxaa soo baxday in maamulka Jubaland uusan la dhacsaneyn mowduuca guud ee bayaanka ay soo saareen guddiga aqalka sare o in muddo ah ba ku howlanaa sidii xal loogu heli lahaa ismariwaaga muddada dheer soo jiitamayay.
Wasiiru dowlaha madaxtooyada Jubaland Xirsi Jaamac Gaani oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in guddigu ay shaqo wanaagsan qabteen, balse aan wali la gaarin xal rasmi ah oo heshiis horseeda.
“War-murtiyeedkan waa bilow fiican oo sheegaya in wada hadal la furi doono, laakiin looma fasiran karo in la soo afjaray ama la dhammeeyay waxyaabihii la isku khilaafsanaa. Dabcan guddiga aqalka sare wuxuu tagi doonaa xarumaha dowlad goboleedyada, halkaas oo ay wada hadal kala sameyn doonaan arrimaha la isku hayo lana rajeynayo in qodobbada ay dowladda Soomaaliya fareen iney fuliso mooyee kuwa kale ay kala hadlaan dowlad goboleedyada ayna dhammeeyaan” ayuu yiri.
Gaani ayaa sidoo kale sheegay inuu jiray walaac ay ka qabeen sida ay heshiisyada ku hir gali karaan.
“Waa rajo fiican, wax badan ayaan raadineynay cid damaanad qaadda oo arrintan dhexdhexaad ka noqon karta, maadaama dowladda federaalka aysan meesha kasoo qaadin heshiis kasta oo la galo”.
Qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada
War-murtiyeedka ay shalay soo saareen guddiga aqalka ayaa lagu xusay ilaa 12 cabasho oo ay qabaan dowlad goboleedyada qeybta ka ah federaalka Soomaaliya.
8 ka mid ah tabashooyinka ayaa ah kuwo ay si wada jir ah u wadaagaan afarta maamul goboleed ee kala ah Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, halka 4 kalena ay yihiin kuwo ay mid mid u qabaan.
Tabashooyinka ay isla qabaan ayaa kala ah:
Galmudug ayaa dooneysa in lala dhiso ciidamo iyo in laga caawiyo dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab.
Xal ma loo helay khilaafka?
Xubnaha guddiga aqalka sare ayaa shalay sheegay in wadada loo xaaray kulan ay heshiis ku kala saxiixanayaan labada dhinac, hase ahaatee dad badan ayaa wali u arka in arrintu aysan wali bislaanin, maadaama durba qaar ka mid ah maamul goboleedyada, gaar ahaan maamulka Jubaland uu ka fal celiyay kuna tilmaamay mid aan xal toos ah laga gaarin.
Sidoo kale waxaa maanta warsaxaafadeed ku saabsan warmurtiyeedkii shalay ka soo baxay Aqalka Sare soo saaray golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo ay hadda isugu soo hareen saddexda maamul ee kala ah Jubaland, Galmudug iyo Puntland.
Warsaxaafadeedkan oo uu ku saxiixnaa guddoomiyaha golahaasi Axmed Ducaale Geelle Xaaf, oo ah madaxweynaha Galmudug, ayaa lagu yiri: “Golaha iskaashiga dowlad goboleedyada Soomaaliyeed (GIDG), isagoo tixraacaya warmurtiyeedkii uu soo saaray Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed kuna taariikheysnaa 24-kii Nofember 2018, kuna saabsanaa xal u helidda khilaafka u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.
Haddaba, Golaha iskaashiga dowlad goboleedyada Soomaaliyeed (GIDG), isagoo tixraacaya dadaalka uu muujiyay Aqalka sare ee BFS, asagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah, uu ugu kuur galay halka uu salka ku hayo khilaafka soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, wuxuu si kalsooni ku jirto u soo dhaweynayaa dedaalka iyo mowqifka uu qaatay Aqalka Sare ee BFS, taasi oo ah awoodda uu siinayo dastuurka, si ay dowlad goboleedyada u helaan matalaad dhab ah ee hannaanka federaalka.
Goluhu wuxuu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo aqalka sare ee BFS sidii xal loogu heli karo khilaafka jira oo salka ku haya sidii loo fulin lahaa wixii lagu ballamo oo ah dan Soomaaliyeed”.
Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka mas’uuliyiinta dowladda federaalka, oo ay mowqifkooda ku muujinayaan.
Khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ahaa mid dhowr soo noqnoqday ayaa gaaraya halkii ugu sareysay, waxayna labada dhinac ay hadallo kulul isku marsiinayeen warbaahinta.
Posted byadmin December 10, 2018 Posted inUncategorizedLeave a comment on Ma la soo afjaray Khilaafkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada?
SIBU SIRE COMMUNICATION
‘Maalintii arooskayga ayaa la i kufsaday’
Posted byadmin December 10, 2018 Posted inUncategorizedLeave a comment on Ninkan wuxuu gudaha kasoo garaacay naxashkii loogu waday qabriga
Uhuru Kenyatta: Idinkuna Jaadka naga qaata annaguna Kalluunka noo keena
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa intii uu socday shirkii maanta soo gabogaboobay ee Dhaqaalaha Biyaha waxa uu booqday goobtii lagu soo bandhigayay wax soo saarka Soomaaliya, wuxuuna ka yiri hadal kaftan-ah.
Posted byadmin December 10, 2018 Posted inUncategorizedLeave a comment on Uhuru Kenyatta: Idinkuna Jaadka naga qaata annaguna Kalluunka noo keena
bbc somali, Proudly powered by WordPress.